Fahantrana amin'ny silikone. Haunting Valley, nataon'i Anna Wiener
Samy niandrandra an'io andian-jiolahim-boto io sy geek hafa avy any Silicon Valley izahay rehetra. Vondron-janaka ray iray izay nanambara rafitra ara-toekarena vaovao ho tombontsoan'ny rehetra ary miompana amin'ny fiarahamonina fifanampiana. Vao mangiran-dratsy ny tontolon'ny teknolojia vaovao miaraka amin'ireo tombony be voninahitra sy ny fanombohana azy ho vahaolana amin'ny olana rehetra, manomboka amin'ny hemôrôida ka hatrany amin'ny habakabaka maharesy.
Saingy ireo zavatra ireo dia mitaona foana hanehoana ny asany mahantra avy ao anatiny. Ary tsy hoe izaho dia curmudgeon taloha (na mety eny) mitaintaina sao hianjera amin'ny lanjany ihany ny zavatra. Ny zavatra iray dia, panaceas ankoatr'izay; placebos tsy mety diso amin'ny karazana mololo ara-tsaina rehetra; na boky manampy ny tenany miaraka amin'i Bill Gates afaka 7 andro, Anna wiener saika hitantara amintsika ny zava-drehetra izy ...
Tamin'ny 2013, tamin'ny faha-XNUMX taonany, dia nanapa-kevitra i Anna Wiener fa hiala amin'ny asany tsy misy fotony amin'ny maha-mpanampy azy amin'ny famoahana lahatsoratra amin'ny maso ivoho asa soratra any New York noho ireo fampanantenan-tena manintona ireo fanombohana teknolojia vao manomboka. Fitsangatsanganana izay hitarika azy hifindra any San Francisco ary hanao sonia ho an'ny orinasa mpandinika data vaovao. Ao amin'ny tontolon'ny mikraoba Silicon Valley dia hiara-misalahy amin'ireo mpandraharaha tanora sy mafana fo ianao amin'ny hazakazaka manaitaitra ho an'ny fanavaozana, harena ary, mazava ho azy, fahefana.
Miaraka amin'ny fahamendrehana tokana, Anna Wiener dia manambara ny lafiny maizin'ny Silicon Valley - ireo idealy diso, andro tsy misy farany, ny corporatism manalavitra, ny misogyny endemy -, ary mandeha amin'ny làlana tsara eo anelanelan'ny utopia sy dystopia izay misy ireo efitrano teknolojika mitady hanova tanteraka ny izao tontolo izao nefa mampidi-doza ny fiarahamonina misy antsika: manomboka amin'ny fanaraha-maso tsy azo ihodivirana apetraky ny fampiharana sy ny tambajotra amintsika, hatramin'ny tsy fitoviana mahery vaika izay nanaratsy endrika ny ivon-toerany, tanànan'i San Francisco. Tantara iray miavaka, izay mamaky toa ny tantara, momba ny indostria mahery vaika rehetra sy ireo olona mandrafitra azy, izay nametraka ny mpanoratra azy ho iray amin'ireo feo tena ilaina hamaritana ity vanim-potoana niomerika ity.
Azonao atao izao ny mividy "Uncanny Valley", avy amin'i Anna Wiener, eto:
Tags Anna wiener, Boky ankehitriny